Fanohanana sy serivisy - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
1. serivisy alohan'ny varotra: ny varotray dia hifandray aminao mba hahafantaranao ny zavatra takinao momba ny famaritana ny router cnc sy ny karazana asa hataonao, dia hanolotra ny vahaolana tsara indrindra ho anao izahay.Mba hanamafisana ny mpanjifa tsirairay dia mahazo ny milina tena ilaina.
2. serivisy mandritra ny famokarana: handefa sary izahay mandritra ny famokarana, mba hahafahan'ny mpanjifa mahafantatra antsipiriany bebe kokoa momba ny filaharana amin'ny fanamboarana ny milinany ary manome ny soso-kevitr'izy ireo.
3. serivisy alohan'ny fandefasana: haka sary izahay ary hanamarina amin'ny mpanjifa ny fepetra momba ny baikony mba hisorohana ny fahadisoan'ny milina fanaovana diso.
4. serivisy aorian'ny fandefasana: hanoratra amin'ny mpanjifa izahay amin'ny fotoana hiaingan'ny milina, mba hahafahan'ny mpanjifa manao fanomanana ampy amin'ny milina.
5. serivisy aorian'ny fahatongavana: hanamarina amin'ny mpanjifa izahay raha tsara ny milina, ary jereo raha misy kojakoja tsy hita.
6. serivisy fampianarana: misy boky sy horonan-tsary momba ny fampiasana milina.Raha misy mpanjifa manana fanontaniana fanampiny momba izany dia manana teknisianina matihanina izahay hanampy amin'ny fametrahana sy hampianatra ny fomba fampiasana amin'ny alàlan'ny Skype, antso, horonan-tsary, mailaka na fanaraha-maso lavitra, sns.
7. serivisy fiantohana: manolotra fiantohana 12 volana ho an'ny milina manontolo izahay.Raha misy hadisoana amin'ny ampahany amin'ny milina ao anatin'ny vanim-potoana fiantohana, dia hosoloinay maimaim-poana izany.
8. serivisy amin'ny fotoana maharitra: manantena izahay fa ny mpanjifa rehetra dia afaka mampiasa mora foana ny milina ary mankafy ny fampiasana azy.Raha manana olana amin'ny milina ny mpanjifa ao anatin'ny 3 taona na mihoatra, azafady mba mifandraisa aminay malalaka.
1. Inona ny milina laser Cnc
Amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny famoahana tamin'ny laser, dia apetraka eo amin'ny rafi-pihetsiketsehana ny milina mba hahafahan'ny laser manodina tsara ny fitaovana.
2. Inona no karazana milina laser?
1) tamin'ny laser Co2: tamin'ny laser Co2 mahazatra / tamin'ny laser Mixed Co2 ( tamin'ny laser Co2 ho an'ny metaly sy tsy metaly)
2) Fibre tamin'ny laser fanapahana milina
3) Masinina marika: Fibre Laser Marking Machine / Co2 Laser Marking Machine
3. Ny tena fanamafisana ny milina laser (fanampiana)
1 fantsona laser (kojakoja azo ampiasaina) + famatsiana herinaratra tamin'ny laser 2 rafitra fanaraha-maso 3 latabatra fiasana (latabatra antsy, latabatra tantely) 4 rafitra fiara: fehikibo, visy baolina (laser Co2 mifangaro ) 5 maotera sy fiara (mitovy amin'ny milina fanoratana) 6 fitaratra telo , fitaratra iray mifantoka 7 fametrahan-jiro mena 8 mpitari-dalana lalamby (mahazatra: XY axis / mifangaro mifangaro: XYZ axis) + slider 9 OMRON limit switch
Azo alaina: latabatra manandratra, paompy rano (chiller), rafitra fanosotra, fantson-drano, compressor rivotra
4. Inona avy ireo rafitra efatra mahazatra amin'ny milina laser?
Fitaovam-pamokarana: Avoaka any ivelany ny setroka
Air compressor: fanampiny fanapahana, fanampiny sokitra, pumping ny potipoti-javatra
Chiller: Ahena ny hafanan'ny fantsona laser mba hahazoana antoka ny asa maharitra
Tany mena: Tsy hita maso ny laser, koa ampiasao ny emitter mena mba hamaritana ny toerana misy azy
5. Inona avy ireo mpanamboatra laser fibre?
Ao an-trano: Raycus UK: GSI, JK laser dia sampana
Alemaina: IPG Etazonia: Nlight
6. Fibre tamin'ny laser fanapahana hery
7. Maximum fanapahana hatevin'ny sy ny fanapahana haingana ny fibre tamin'ny laser cutter Maximum fanapahana hatevin'ny
300w karbaona vy ≤ 3 Stainless vy ≤ 1.2
750w karbaona vy ≤8 Stainless vy ≤4
1000w karbaona vy ≤ 10 Stainless vy ≤ 6
8. Co2 tamin'ny laser fantsona marika
9. Inona no herin'ny fantsona laser CO2?
Ny hery mahazatra dia 40w, 60w, 80w, 100w, 130w, 150w, 180w, 280w
Ny lehibe kokoa ny herin'ny fantsona laser, ny matevina ny hatevin'ny fanapahana, ary ny lehibe kokoa ny hery, rehefa manapaka fitaovana matevina mitovy, dia haingana kokoa ny manapaka.Ny lehibe kokoa ny hery, ny lafo kokoa ny vokatra.Arakaraka ny lehibe kokoa ny hery dia ratsy kokoa ny vokatry ny sokitra.Ny lehibe kokoa ny hery no ratsy kokoa ny fahamarinan-toerana.Ny 60w no hery mety indrindra amin'ny fanaovana sokitra.
10. Laser Tube fanompoana fiainana